NOOCYADA BOQOSHAADA LA CUNI KARO - BOQOSHAADA LA CUNI KARO
Fossa waxay ka tirsan tahay caanaha Reer Fizalakbar. Waxaa jira noocyo of boqoshaada la cuni karo iyo cufan. Mushinka wuxuu leeyahay dabool yar oo ka kooban 2 ilaa 10 sentimitir. Boqollaal dhalinyaradu waxay leeyihiin daboolka muraayadaha oo leh geeso ciriiri ah, iyo kuwa qaangaar ah oo leh mid leh monochromatic, yellow or brownish.
Waa muhiim! Waa in aan bartaa sida loo kala saaro boqoshaada la cuni karo iyo boqoshaada aan la dabooli karin..
Waxaa jira noocyo kala duwan oo boqoshaada la cuni karo. Wakiil cad oo ka mid ah kuwan waa boqoshaada jiilaalka. Kuwani waa boqoshaada la cuni karo oo dhadhan fiican leh. Waxaad isticmaali kartaa boqoshaada cusub oo la qalajiyey labadaba. Farqiga u dhexeeya noocyada noocyadani waa jaakad jilicsan oo jilicsan ilaa 9 sentimitir dhexroor, oo u dhaw bartamaha midabkiisa ayaa noqotaa mid faro badan. Qalajinta, daboolka budada jiilaalka wuxuu bilaabmaa gleam. Lugaha cidhifyada adag iyo cufnaanta waxay u dhawyihiin midabada madow. Fangasku wuxuu leeyahay jaale huruud ah iyo dhadhan fiican. Waxaad ka heli kartaa sida likaha oo ah meel bannaan ama qoyan. Mushrooms waxaa la ururin karaa laga bilaabo Oktoobar ilaa Disembar. Haddii jiilaalka diiran yahay, ururintu waxay socon kartaa illaa February. Hoolku waa gebi ahaanba mid aan midab lahayn.
Noocyada noocaan ah ee boqoshaada waxaa iska leh qoyska Ryadovkov. Koofiyado leh geeso la isku qurxiyo, inta badan aan ka badnayn 10 sentimitir dhexroor. Waxay leedahay midab casaan, cagaaran ama maqaarka madow. Dusha sare waxaa laga helaa qadhaadh. Galkan waxaa ku yaal fur cufan oo cufan, taasoo ugu dambeyntii noqonaysa mid khafiif ah oo tastier ah, bilaabay inuu si fiican u uriyo. Boqoshaada la gooyo xilliga dayrta waxaa lagu kala soocayaa taarikooyin dhif ah oo ku dhajiya jirida. Marka fangaska ugu dambeyn soo baxo, taarikadaan waxay noqdaan bunni-casaan ah oo midab leh, marmarna waxaa lagu daboolay dhibco. Waxay badanaa dhacdaa in wareegga dayrta ay noqoto dulin. Wuxuu ku dhacaa geedaha, xoortay, iyo mararka qaarkood xitaa baradho. Shingles waxay sababtaa qulqulka qoryaha, taas oo ah waxyeello alwaax.
Ma taqaanaa? Waxaad ka heli kartaa malabkii leh cap ugu yaraan 17 sentimitir dhexroor.
Mushaarada ka soo jeeda kooxdan waxay ku koraan caleemo dhicid ah ee kooxo badan oo xagaaga ah. Daboolka wuxuu gaaraa 5 sentimitir dhexroor. Waxay u egtahay marinka ama wareegga nuska ah ee midabka cad oo leh jilbaha geesaha. Fungus waxay leedahay ur ah toon cad oo dhalaalaya iyo baraf cad. Taargooyadu waxay hore u kortaan lugta, kadibna waxay noqdaan kuwo bilaash ah oo naadir ah, caddaan ah. Lugta ciriiriga ah ee fangaska ayaa koraaya 10 sentimitir, halka dhumucduna tahay 0.2-0.3 millimitir oo keliya. Midabka lugaha ayaa ah brown-brown, u dhow salka uu noqdo mid cufan. Cun kalluunka waa la kariyaa labadaba la kariyo loona qalajiyo sabiibta.
Toonta caadiga ah
Toontani waa miis jooge ah oo dhan xilli-kobeedka. Waxaa badanaa laga goostaa guga illaa dayrta, laakiin haddii uu jiro dhalaalid jiilaalka, sida likaha waxaa laga heli karaa xilliga jiilaalka. Koofiyadu waa wax aan ka badnayn saddex sentimitir dhexroor. Koofiyadda xorta ah ee marwalba waa marwalba shaxan ama wax yar oo niyadjab leh. Jidhku waa mid khafiif ah, cad. Inta lagu jiro roobabka ama markaad jajabiso fungus, waxay ka timaadaa urta toonta. Taariiqda midabada leh ee jilicsan ayaa badanaa ku yaal. Cajiibka iyo cagaha lafdhabarta dhererka ilaa 6 sentimitir iyo ilaa 3 millimitir dhexdhexaad ah, waxoogaa iftiin leh, wuxuu leeyahay midab guduud ah oo madow.
Waa muhiim! Garlic ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada. Waxay soo saartaa diyaargarow adag oo ah bactericidal iyo antiviral ficilka ficilka. Sidoo kale waxaa mahad leh alaabteeda, boqoshaada waxay sii wadi kartaa nafaqada iyo nolol shelf ee muddo dheer..
Negniyuchki, marsmius, caleen iyo xitaa boqoshaada jajab. Dhamaan kuwan waa magacyada lowska isku mid ah - agaric meeraha. Haddii boqoshaada la qalajiyey ay biyo ku shubeen, waxay soo noolaanayaan mar kale waxayna awoodi doonaan inay soo saaraan dhirbaaxo loogu talagalay taranta. Tani waa caddayn badan oo ka mid ah dadka wax soo saarka leh ee arkay sawir sidan ah, maaddaama roobka ka dib, boqoshaada "dhintay", oo la kulmay biyo, "ayaa noloshooda u yimid" mar labaadna sii waday horumarkooda iyo midhaha.
Dhexdhexaadiyaha daboolka kama badnaan karo 9 sentimitir, midabkiisu waa huruud ama casaan-bunni. Xilliga cimilada qoyan, koofiyada qulqulka qulqulatadu waxay u egtahay midabkeedu yahay midabkeed, laakiin qoyaanku waa mid adag oo dhegdheg leh. Qaabku wuxuu u egyahay lafdhabarta dhexdhexaad ah ee bartamaha. Waqtiga ugu wanaagsan ee la ururiyo waa laga bilaabo guga dabayaaqada ilaa xilliga dayrta.
Beeraha xilliga gu'ga waxaa sidoo kale loo yaqaan "cololibria dubolubivaya." Tani waa mid caadi ah, laakiin liis yar oo la yaqaan. Cuntada waa in la kariyaa ilaa 15 daqiiqo, haddii kale waxaad heli kartaa calool xanuun. Goobta guga waxaa ku jira koofiyal isku dhafan oo ah midab jaalle ah ama midab khafiif ah. Isku soo uruuri mulkiilaha qoyan oo qoyan oo qoyan laga bilaabo guga dabayaaqada illaa badhtamaha-badhtamaha. Marka ururinta likaha sida, aad u taxaddar, sababtoo ah waxaa lagu wareeri karaa boqoshaada la dabacsan ee isla nooc. Isbeddelka fangasta aan la dabooli karin waa urta dabeecada ah ee kaabajka ah iyo qaabka qalafsan.
Kala duwanaansho kale oo boqoshaada ah boqoshaada xagaaga, iyo, adoo adeegsanaya magaca, way cadahay marka ay koraan. Xilliga xagaaga ayaa u muuqda kaynta si bilowga xagaaga oo kora ilaa dhamaadka dayrta. Boqolaalkani waxay leeyihiin dhadhan fiican labadaba lakabyo iyo cusub. Kala duwanaanta noocaan ah waxaa loo isticmaalaa sidii cunto fudud ama buuxinta pies. Koofiyad yar, oo aan ka badnayn 8 sentimitir dhexdhexaad ah, wuxuu noqdaa bunal ama brown intiisa badan oo hufan ka dib roobka. Iyada oo ku xiran da'da boqoshaada, furkiisa ayaa isbeddelaya qaabkeeda ka soo gaabinta kabadaha si aad u dheer. Laabashada ilaa 9 sentimitir dhererkiisu waa ka fudud yahay daboolka oo leh giraan caan ah, oo ay ku jirto miisaanno ku yaal.
Tani waa nooca ugu caansan ee fasalka "la cuni karo", taas oo lagu goosanayo qiyaasta wax soo saarka. Tilmaamihiisu waa sida soo socota: qaabka isbeddelka ah ee kudhowaad 8 sentimitir dhexdhexaad ah markasta waxa uu noqdaa mid si buuxda u sujuudaya; midabka waa grayish; jidhku waa caddaan, cufan ku filan, wuxuu ka soo baxaa dhadhan qoob-ka leh. Cagta sidoo kale waxay noqon kartaa 8 sentimitir dhererkeedu yahay ilaa 2 sentimitir dhexroor. Qaabka qaabdhismeedku waa cylindrical, waana wax yar oo ka yaraato daboolka, jidhkuna waa adag yahay iyo xajmiga. Xilliga koritaanka firfircoon ee Musqulo Toltaogga wuxuu bilaabmaa bisha Agoosto wuxuuna soconayaa ilaa Oktoobar. Inta badan waxay ku koraan kooxo badan, laakiin ma xidhaan xirmo.
Ma taqaanaa? Dalalka leh cimilada diiran, boqoshaada waxaa la ururiyaa sanadka oo dhan..
Xumad iftiin leh
Magac kale oo loogu talagalay funguskaan waa udemansiella mucous. Waa mid la cuni karo, balse lakabkiisu hooseeyo maaha mid aan daneyneynin dadka soo iibsada. Dhexdhexaadku wuxuu u dhexeeyaa 2 ilaa 8 sentimitir. Boqoshaada dhallinyarada ah ayaa badanaa leh xargo wareegsan, boqoshaada waayeelka - oo leh sujuud. Koofiyadu waa caddaan leh xarun yar oo bunni ah, waxay ku iftiimaysaa dhinacyada. Magaca wuxuu ka yimaadaa maqaarka hufan ee daboolaya daboolka fangaska iyo xab-ka hoosta hoostiisa. Lugta fangaska waa qiyaastii 8 sentimitir sare iyo qiyaastii 5 millimitir oo ballaaran. Saldhigga cagaha waa shaan yar. Waxa kale oo jira giraan ka baxsan maqaarka qalalan, ka dibna dheecaan.
Geed geedo ah
Boqolaalkani waxay isku mid yihiin qaab-dhismeedkii hore, sharraxaadintuna waxay isku mid noqotaa. Tusaale ahaan, xiritaankooda sidoo kale waxay leeyihiin qaab isku dhafan oo da 'yar ah waxayna noqdaan kuwo u sujuudsan sida da'doodu tahay. Koofiyadu waa jajab, oo leh dusha sawirka, dhexroorku waa qiyaastii 7 sentimitir. Galka ayaa ah mid adag, cylindrical, midabka, sida kaabaha, waa huruud-casaan. Si tartiib ah u sii faafaya saldhigga, waxay gaari kartaa 2 sentimitir ballaaran iyo 7 dherer. Noocyadaas waxaa lagu helaa kaymaha qallafsan. Sameeyso jirridda larch. Waqtiga beertu wuxuu bilaabmaa bartamaha xagaaga waxaana uu socdaa ilaa xilliga dayrta. Marka da 'yar, fangasku wuxuu leeyahay dhadhan qadhaadh ah, taas oo ah sababta dad badani u tixgelin waayaan in la cuni karo.